U Moe – Healthy Life Journal
Posts By U Moe
နှစ်သစ်ကစပြီး ဒေါသကို ဘယ်လို ထိန်းကြမလဲ
၂၀၁၇ တစ်နှစ်လုံးကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရ အောင်။ ဒေါသထွက်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ၊ အချိန် အခါတွေ ဘယ် လောက်တောင်များခဲ့သလဲ . .၊ ဒေါသ ထွက်တဲ့အခါ ဘယ်လောက်တောင်မှားခဲ့သလဲ . . ၊ ဒေါသထွက်ပြီး အ ပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ အ...
သင့်အသည်းကို ကြင်နာသည့် အစာ ၁၃မျိုး
ဦးမိုး အသည်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒုတိယအကြီးမားဆုံး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေပြားက အကြီးမားဆုံး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် အသည်းက အလေးချိန် သုံးပေါင်နီးပါး ရှိပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့...
အမျိုးသား သွေးဆုံးခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
၊ ဦးမိုး ၊ အမျိုးသမီးတွေ အသက်ကြီးလာချိန်မှာ သွေးဆုံးသွားသလိုပဲ အမျိုးသားတွေကလည်း အသက်ကြီးလာ လေလေ၊ ကျားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုန်းထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းလာလေလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေကို အမျိုးသားသွေးဆုံးခြင်း (Andropause)လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ – အမျိုးသား သွေးဆုံးခြင်းဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်း ကျားဟော်မုန်းကို...
နှစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတွင် အရက်ကြောင့်ရရှိမည့် ဆိုးကျိုး လျော့ကျအောင် . . .
ဦးမိုး နှစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲမှာ အမျိုးသားအများစုဟာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ၀ိုင်းဖွဲ့စားသောက်ရင်း အရက်သောက်မိတတ်ပါတယ်။ အရက်ကို အလွန်အမင်းသောက်မိရင် နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာ အရက်နာကျဝေဒနာရတတ်သလို အရက်ရဲ့ နောက် ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးဒဏ်လည်း ခံရတတ်ပါတယ်။ ဒီလို မဖြစ်စေဖို့ အရက်မသောက်တာ...
နှလုံး၊ ဆီးကျိတ်နဲ့ စိတ်ကျန်းမာဖို့ ဘာတွေစားသင့်သလဲ
၊ ဦးမိုး ၊ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲထည့်သမျှ အစာတွေက သူရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် သက် ရောက်မှု ရှိနေပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝဖို့နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ရာအတွက် အမျိုးသားတွေအထူးတလည် စားသင့်တဲ့ အစာတွေရှိပါတယ်။ – နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် အစာ အမျိုးသားတွေ...
ကျန်းမာရေးချူ ချာသော အမျိုးသားတို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ ဦးမိုး ၊ ဆရာဝန်နဲ့ မတွေ့ဆုံဖြစ်ဘူး ဆိုရင်၊ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဆေးစစ်ထားတာကို သတိမရတော့ဘူး ဆိုရင် ဒါက သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အမျိုးသားတွေက ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု နည်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ချူချာပါတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတွေတောင်...
ကျောက်ကပ် ကျန်းမာစေကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ ဦးမိုး ၊ “ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုကောင်း၏” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း လိုက်နာနိုင်ဖို့ ကျောက်ကပ် ကျန်းမာရေးအတွက် နည်းလမ်း ကောင်းတွေကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ (၁) ကျောက်ကပ်အပေါ် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချပါ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေ လျော့ကျစေဖို့...
အရက်နာကျဝေဒနာ ဖြစ်တတ်သူအတွက် သဘာဝကုထုံးများ
၊ ဦးမိုး ၊ အရက်သောက်ပြီးတိုင်း ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ၊ အန်တာ၊ နွမ်းနယ်တာ အစရှိတဲ့ ဝေဒနာတွေ ခံစားနေရရင် အဲဒါအရက်နာကျဝေဒနာ ရနေတာပါ။ အရက်က ဆီးသွားစေတာကြောင့် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက် တတ်ပါတယ်။ အရက်နာကျ ဝေဒနာမရအောင် အကောင်းဆုံးက အရက်မသောက်ဘဲ နေဖို့ပါ။...